एउटा प्रेमिल पत्र–‘प्रिय मान्छे काेराेनाबाट आफ्नो ख्याल गर है’ - Ilam Aawaj
एउटा प्रेमिल पत्र–‘प्रिय मान्छे काेराेनाबाट आफ्नो ख्याल गर है’
मनीषा अधिकारी ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:४३
तिमी छौ र पो यो जिन्दगी चलेको छ । म यहाँ सञ्चै छु । त्यहाँ तिमी सञ्चै छौ भन्ने लागेको छ । खै के भन्ने र प्रिय मान्छे । अरूभन्दा पनि तिम्रै मायाले म तड्पिएको छु । करिब डेढ बर्षअघिबाटै कोरोना भाइरस (कोभिड –१९)को संसारभर राज छ । मानव जीवनको आँशुमा कोरोना भाइरस रमाइरहेको छ । कोरोना भाइरस कति निष्ठुरी र कठोर रहेछ हगी ! मलाई संसारमा सबभन्दा निष्ठुरी र कठोर तिमी लाग्थ्यो तर म भ्रममा पो रहेछु । तिमी त खुब प्रेमिल रहेछौं प्रिय मान्छे !
संसारभरी कोरोना भाइरसका कारण धेरै अप्रिय घटना दिनप्रतिदिन घटिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा संसारको सानो टुक्रा नेपाल कहाँ अछुत रह्यो र नेपालभरी पनि कोरोना भाइरसले आफ्नो हक जमाएर धेरैको खुसीहरु लुटिस्क्यो । यो विकराल परिस्थिति तिम्रो शहरमा पनि उदाइरहेको ।
मैले तिमीलाई गर्ने प्रेम कोरोनाले मानव जीवनमा पु¥याएको क्षति जति त पक्कै छैन । तर एउटा कुरा याद गर प्रेम गन्न÷भन्न र नाप्न सकिदैन । प्रेम बजारमा बिक्री गर्न सजाइएका कुनै आकर्षक सामग्री होइन मन र धन भए गएर किनी हाल्ने । यो त अतुलनीय र अमूल्य छ लाग्छ मैले तिमीलाई गर्ने प्रेम भर्खरै मायालु जोडी छुटेका बील गेट्सले पनि खरिद गर्न सक्दैन्न ।
धनले प्रेम किन्ने भए किन संसारकै धनी मानिसको प्रेम छुटिसक्थ्यो र है ! शारीरिक आकर्षक भन्दामाथि रहेर गरिने प्रेम वास्तविक प्रेम हो । प्रेम अनुभूति हो, विश्वास हो, त्याग हो, समर्पण हो, महसुस हो, इज्जत हो र प्रतिष्ठा हो । जुन तिमीबाट मैले असीमित पाएको छु र दिलाएको छु ।
प्रेममा पर्याप्तता कहिल्यै, कसैसँग र कसैगरी हुँदैन । यही अपर्याप्तताको कारण नै म तिम्रो प्रेमको खोजीमा भौतारिन्छु लाग्छ तिमी पनि यो समयमा मेरो अनमोल प्रेमको खोजीमा भौतारिएका छौ । म त तिम्रो प्रेमको पुजारी । प्रेमको महत्व र गरिमा यसको अमरत्वसँग राखेर हिँडेकी छु । सच्चा प्रेममा निष्ठा र नैतिकताले कुनै चस्मा लगाउनै पर्दैन । सच्चा प्रेम शरीरभन्दा माथि उठेको हुन्छ जसको सम्बन्ध मनमुटुसँग जोडिएको हुँदो रहेछ । जुन म तिम्रो प्रेमबाट महसुस गरिरहेकी छु र मैलेपनि तिमीलाई महसुस गराउँदै छु । मैले तिमीलाई गर्ने प्रेममा कुनै सम्झौता छैन मेरो मन त तिम्रो प्रेमको समझदारीले टम्म भरिएको छ ।
तिमीलाई अवगत नै छ प्रेम कहिल्यै जटिल र समस्याग्रस्त बन्नु हुदैन प्रेम सहज र सहानुभूतिले भरिपूर्ण हुनुपर्छ ।
विषम परिस्थितिले तिम्रो प्रेमिल मुहारको दर्शन त पाएको छैन तर जब बिहान म आँखा खोल्छु । मैले तिमीलाई गर्ने प्रेम स्पन्दनमा स्पन्दित पाउछु । प्रत्यक्ष देख्न नपाएता पनि म तिम्रो मन्द मुस्कान, ठिक्क बोल्न बानी,सबैलाई सम्मान व्यावहार गर्न सक्ने क्षमता र मेरो फ्र्यांकनेसमा मोहित हुने तिमी असाध्यै मिस गर्छु ।
तसर्थ प्रेमको शक्ति र सामर्थ्य अपराजित र अप्रितम छ । मैले तिमीलाई गर्ने प्रेम एक प्रेमिकाले प्रेमीलाई गर्ने मायाको र तुलनामा अगणित छ । सायद, तिमीले आजसम्म पनि कुनै हिसाब राख्न सकेको छैनौ त्यो कष्ट नगर तिमी विफल बन्ने छौ । मैले तिमीमा एक प्रेमी मात्रै नभएर आफ्नो परिवारको रूप देखेकी छु, एक असल अभिभावक भेटेकी छु, आँट र भरोसा पाएकी छु, सपना पूरा गर्न तल्लीन हुनपर्ने मेहनत सिकेकी छु, मिल्ने साथीको साथ पाएकी छु हो म तिमी मा हराएकी छु ।
लाग्छ हिजो मैले एक्लै हेरेको हाफ मुन तिमीसँगै हेर्न पाए अत्यन्तै प्रेममय पल प्रेमिल अनुभूतिले तिमीसँगै नियाल्न पाए पूर्ण देखिन्थ्यो होला ।
म तिम्रो पेशा,पद र धनलाई हेरेर कति पनि लालहित छैन मैले तिमीलाई पाउनै लागि मात्रै माया गरेको हैन थाहा छ ‘प्रेम प्राप्ति मात्रै होइन त्याग पनि हो ।’ मेरो आत्मले तिमीलाई अथाह प्रेम गर्छ आध्यात्मिक प्रेम जीवनको आदर्श हो, जीवन जीउने शैली हो, खुसी हुने कारण हो, सुध्रिएको व्यवहार हो, जीवनको शान्ति हो त्यो शान्ति तिमीमा पाएको छु ।
तिमी मेरो लागि धेरै महत्वपूर्ण मान्छे हौ । जति तिम्रो आमाले तिमीलाई महत्व दिएर ख्याल गर्नुहुन्छ तुलनात्मक रुपमा मैलेपनि तिम्रो त्यति नै ख्याल गर्छु, गर्न चाहन्छु । हो हाम्रो प्रेमजोडी अन्य जोडीको तुलनामा केही फरक र संघर्षपूर्ण जीवन विताई रहेको छ । तर म अरुको प्रेमिल जोडी हेरेर कतिपनि जलन हुन्न म हाम्रो प्रेममा इतिहासमा पढिएका रोमियो–जुलियट, लैला–मज्नु, मुना–मदनको कहानी पनि खोज्दिन ।
म चाहन्छु हाम्रो प्रेममा नयाँ र केही सिर्जनशिल कहानी बनाउ जसमा मुनाको ठाउँमा म र मदनको ठाउँमा तिमी हुनेछौ । प्रेमले अभावमा भाव पैदा गराउँछ र जीवनलाई सुखद बनाउँछ । सच्चा प्रेमले परस्परमा हार र जीतलाई सहजै स्वीकार गर्दछ । आखिर प्रेम सहजताको राजमार्गबाट मात्रै हिँड्न सक्ने चिल्लो गाडी हो । सच्चा प्रेम गर्नेले शरीरलाई साधन होइन साध्यको रूपमा हेर्छन् । तिमी एक सच्चा प्रेमीको रूपमा परिचित छौ ।
कोरोनाबाट बचेर फेरि पनि तिमीसँग भेट्नलाई म अहिले आफ्नै गाउँ आएको छु आफ्नै काममा व्यस्त हुन थाले, तिमी आफ्नै काममा यतिका अगणित प्रेम हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ औधी डर लाग्छ सम्बन्ध भनेको त समयको दासी रहेछ ।
म तिमीलाई असाध्यै चाहन्छु तर कुन रूपमा चाहन्छु मसँग कुनै परिभाषा छैन। म गन्तब्य विहीन यात्री झैँ विना गन्तव्यको प्रेममा हिडिरहेको छु । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले थलथलाएर ग्रस्त बिरामी पारेको यो समयमा तिमी र म आ–आफ्नो ठाउँमा सुरक्षा त अपनाएरै बसेका छौ । तर समय प्रतिकूल छ, यो विषमतालाई परास्त गर्दै फेरि हाम्रो भेट हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी दिइरहेको छैन समयले । मन ढुक्क छ यहाँ हाम्रो भेट नभए त के भयो जन्म र मृत्यु जीवनको असिम सत्य हो जो अघिपछि भएपनी कुरेर बसौला !
–प्रिय मान्छे टाढा छौ आफ्नो ख्याल गर है–
–कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाएका सम्पूर्णमा श्रद्धा सुमन ।
–सम्पूर्ण विरामीमा स्वास्थलाभको कामना ।